सर्जिकल लाइट, अपरेटिंग टेबल, मेडिकल लटकन - वान्यु - 雷电竞登
शंघाई वान्यू मेडिकल उपकरण कं, लिमिटेड मुख्यतया अपरेटिंग लाइट्स, अपरेटिंग टेबुल, र मेडिकल पेंडन्ट्स सहित अपरेटिंग कोठा उपकरणको बजारमा ध्यान केन्द्रित गर्दै चिकित्सा उपकरणको बिक्रीमा संलग्न छ। उत्पादनहरु को पूरा लाइन दुनिया भर मा बेचिन्छ, र हामी यूरोप र अमेरिका मा धेरै देशहरुमा विशेष एजेन्सी पार्टनरहरु छ।
१ years बर्षको अनुभव
60० भन्दा बढी उत्पादनहरू
सुन आपूर्तिकर्ता: १।
LEDD500 / 700 छत LE ...
परिचयLEDD500 / 700लेडबलडोमएलईडीअस्पतालमेडिकल लाइटलाई जनाउँछ। अस्पताल मेडिकल लाइट हाउजि insideको भित्रबाट मोटो एल्युमिनियम प्लेटको साथ एल्युमिनियम मिश्र धातुले बनेको हुन्छ, जुन तातो खपतको लागि धेरै सहयोगी हुन्छ। बल्ब एक OSRAM बल्ब हो, पहेंलो र सेतो। एलसीडी टच स्क्रिनले इलिमिनेन्स, रंग तापमान र सीआरआई समायोजित गर्न सक्दछ, जुन सबै दश तहमा समायोज्य छन्। घुमाउने हातले सही स्थितिको लागि हल्का एल्युमिनियम आर्म अपनाउँछ। त्यहाँ वसन्त हतियारको लागि तीन विकल्पहरू छन्, ...
LEDD620620 छत एलईडी ...
परिचय LEDD620 / 620 ले डबल गुम्बज छतमा चढाइएको मेडिकल अपरेटिंग लाइटलाई जनाउँछ। नयाँ उत्पाद, जुन मूल उत्पादको आधारमा अपग्रेड गरिएको छ। एल्युमिनियम मिश्र शैल, अपग्रेड गरिएको आन्तरिक संरचना, राम्रो ताप उर्जा प्रभाव। Lamp दीपक मोड्युलहरू, कूल bul२ बल्ब, दुई र colorsको र पहेंलो, उच्च-गुणवत्ता ओएसआरएएम बल्ब, र color्ग तापमान 00 35००--5००० के समायोज्य, RI ० भन्दा बढी सीआरआई, रोशनी १ 150०,००० लक्ससम्म पुग्न सक्छ। अपरेशन प्यानेल LCD टच स्क्रीन, रोशनी, रंग ...
परिचय LEDD730740 ले डबल पेटल प्रकारको मेडिकल सर्जिकल प्रकाशलाई जनाउँछ। शुद्धिकरण बाकसको साथ अपरेटिंग कोठाको लागि, पंखुली प्रकारले वायु प्रवाहमा बाधा पुर्याउन सक्छ र लामिनेर एयर फ्लोमा धेरै गडबडी क्षेत्रहरू कम गर्दछ। LEDD730740 डबल मेडिकल सर्जिकल लाइटले १ 150०,००० फ्लक्सको अधिकतम रोशनी र color००K को अधिकतम रंग तापमान र C of को अधिकतम सीआरआई प्रदान गर्दछ। सबै प्यारामिटरहरू एलसीडी टच स्क्रिन नियन्त्रण प्यानलमा दश तहमा समायोज्य छन्। ह्याण्डल नयाँ सामग्री, रेसिस्टन बाट बनेको छ ...
परिचय LEDD500700C + M ले डबल डोम एलईडी अपरेटिंग कोठाको प्रकाशलाई जनाउँछ। अंतर्निहित क्यामेरा प्रणाली र बाह्य ह्या hangingिंग मोनिटर प्रशिक्षण उद्देश्यको लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ। यसले अनुगमन र रेकर्डि operations कार्यहरू सक्षम गर्दछ। Dom पेट / सामान्य शल्यक्रिया ■ स्त्री रोगविज्ञान ■ हार्ट / भास्कुलर / थोरैसिक सर्जरी ■ न्यूरोसर्जरी ■ आर्थोपेडिक्स ■ ट्रामाटोलजी / आपतकालीन वा ■ urology / TURP ■ ent / नेत्र रोग विज्ञान ■ एन्डोस्कोपी एंजियोग्राफी सुविधा १. क्यामेरा प्रणालीमा निर्मित क्यामेरा, पर्दा आवश्यक छैन। यो अर्को सेटको साथ ...
TS मैन्युअल हाइड्रोलिक सु ...
परिचय TS हाइड्रोलिक शल्य तालिका sui हो ...
परिचय TDY-1 इलेक्ट्रिक अपरेटिंग तालिका ado ...
TDY-Y-1 बहुउद्देश्यीय ...
परिचय TDY-Y-1electric हाइड्रोलिक ओपेराटिन ...
FD-G-2 चीन इलेक्ट्रिक ...
परिचय FD-G-2 बहुमुखी प्रसूति तालिका म ...
TS-D-100 डबल इलेक्ट्रो ...
परिचय TS-D-100 ले डबल आर्म elec लाई दर्साउँछ ...
परिचय TS-DQ-100 ले डबल आर्म इलेलाई जनाउँछ ...
QF-JX-300 चीन आईसीयू मलाई ...
परिचय QF-JX-300 ले ICU मेडिकल br लाई जनाउँछ ...
TD-TS-100 कारखाना Di ...
परिचय TD-TS-100 ले संयुक्त चिकित्सालाई जनाउँछ ...
एक छत अपरेटिंग लाइट कम फ्लोरको उचाईको साथ वा OR कोठामा स्थापना गर्न सकिदैन?
धेरै वर्षको बिक्री र उत्पादन अनुभवमा हामीले पत्ता लगायौं कि अपरेटिंग लाइट खरीद गर्दा केही उपभोक्ताहरू धेरै अलमल्लमा छन्। छत अपरेटिंग लाइटका लागि यसको आदर्श स्थापना उचाई २.9 मिटर छ। तर जापान, थाईल्याण्ड, इक्वेडर, वा केहि ...
अपरेटिंग लाइटका लागि बिलेटेड मर्मत अर्डर
जब विदेशी ग्राहकहरू भन्छन् कि मैले तपाईंको अपरेटिंग प्रकाश कहिल्यै खरीद गरेको छैन, के यसको गुणवत्ता विश्वसनीय छ? वा तपाईं मबाट धेरै टाढा हुनुहुन्छ। यदि त्यहाँ एक गुणवत्ता समस्या छ भने मैले के गर्नुपर्छ? सबै बिक्री, यस समयमा, तपाईंलाई भन्दछ कि हाम्रो उत्पादनहरू सब भन्दा राम्रो हो। तर के तपाईं साँच्चिकै उनीहरूमा विश्वास गर्नुहुन्छ? प्रोफेशियोको रूपमा ...